दृश्य अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयोग्य डिजाइन | क्रिएटिव अनलाइन
दृश्य अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयोग्य डिजाइन
जोस एन्जेल | | सामान्य, ट्यूटोरियलहरू
हाम्रो दैनिक जीवनको लागि आवश्यक जानकारीको %०% दर्शनको अंग समावेश गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि हामीसँग भएको धेरै जसो कलाहरू, हामीले विकास गर्ने गतिविधिहरू र हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानहरू दृष्टिबाट गरिन्छ। ती सबै व्यक्तिको लागि जोसँग एक इष्टतम दृश्य क्षेत्र छैन, यसले यसलाई अझ धेरै गाह्रो बनाउँछ। नेत्रहीनहरूको लागि पहुँचयोग्य डिजाइन सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो जनसंख्याको एक महत्त्वपूर्ण जनलाई असर गर्दछ।
केही २285 करोड मानिस बढी वा कम प्रभावित छन्। जसमध्ये million करोड totally० लाख अन्धा छन् बाँकी मानिसहरूले कम दृष्टि पाएका छन्। यो सोच्नको लागि समझदार हुन्छ कि हामीले यी सबै व्यक्तिहरूसँग भएका उपकरणहरू अनुकूलित गर्नुपर्दछ। किनकि यसले सबैलाई समान रूपमा समान जानकारीको पहुँच गर्न सजिलो बनाउँदछ।
र दृश्य अक्षमता भएका व्यक्तिको लागि मात्र होइन, अन्य अक्षमताहरू पनि छन् जसले नेभिगेसनलाई प्रभाव पार्दछ।
यस लेखमा हामी दृश्य पक्षमा ध्यान दिन लाग्दछौं। साथै सबैका लागि पढ्ने पोष्टमा वेब पृष्ठहरू परिमार्जन गर्न सुझावहरू। हामी केहि उपकरणहरूको पनि नाम राख्छौं जसले यस कामलाई सजिलो पार्न मद्दत गर्दछ। र हामी हेर्नेछौं कि साधारण छविले कसरी फरक दृश्य अक्षमता भएको व्यक्तिलाई असर गर्छ।
1 यो कसरी वेबसाइटले दृश्य अक्षमता मानिसहरूलाई प्रभाव पार्छ
1.1 कन्ट्रास्ट को घाटा
1.2 भूत दृश्य
1.4 धमिलो दृश्य
1.5 परिधीय दृश्य
2 नेत्रहीन प्रयोगकर्ताका लागि उपकरणहरू
3 सजिलो पहुँचको लागि वेब डिजाइन
3.1 पृष्ठ हेडर प्रदान गर्नुहोस्
3.2 छविहरूमा वैकल्पिक पाठ (ALT)
3.3 जानकारी व्यक्त गर्न, आइकनहरू
3.4 गैर- HTML सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ
यो कसरी वेबसाइटले दृश्य अक्षमता मानिसहरूलाई प्रभाव पार्छ
अशक्ततामा भर पर्दै, एक सामान्य वेब पृष्ठ गुगल निश्चित व्यक्तिको लागि समस्या ल्याउन सक्छ। र कुरा के हो भने, र or्ग वा आकारहरू सीमाहरू हुन सक्छन् यीबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि।
Uरंग अन्धोपन भएको व्यक्तिले केहि र distinguहरू छुट्याउन सक्दैन वा उनीहरूलाई अन्योलमा पार्दैन। यो, गुगल को उपयोग को लागी, महत्वपूर्ण लाग्न सक्छ। तर कल्पना गर्नुहोस् कि त्यहाँ धेरै र colorsहरू छन्, दुबै पृष्ठभूमिमा र बटनहरूमा, समान टोन र चमक भएको रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ। ती बटनहरू हेरेर यसबाट पीडित व्यक्तिलाई गडबडी गर्न सक्छ।
अनौंठो, सही? यो कसरी रंग अन्धोपनको साथ व्यक्तिले यसलाई बुझ्न सक्छ। यो र colors्गको प्रकारमा पनि निर्भर गर्दछ जसले तपाईंलाई असर गर्दछ। 'NoCoffee' विस्तारको साथ अक्षमता अनुसार फरक प्रदर्शन मोडहरू अनुकरण गर्दछ (Google क्रोममा मात्र उपलब्ध)। हामी प्रमाणित गर्न सक्षम छौं यी मानिसहरूले कसरी गरिरहेका छन्। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
कन्ट्रास्ट को घाटा
हामीले पहिले नै भनेजस्तै यस प्रकारको समस्याले कुल २ 285 करोड मानिसहरूलाई असर गर्दछ। तसर्थ, यो पहुँचलाई सजिलो बनाउन हामी केही उपयोगी उपकरणहरूको व्याख्या गर्न गइरहेका छौं जुन हामीले हाम्रो वेबसाइटमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
हामीले पहिले नै थाहा पाइसकेका छौं, त्यहाँ विभिन्न समस्याहरूका लागि उपकरणहरू छन्। पूर्वनिर्धारित उपकरणहरू जुन हाम्रो ब्राउजरहरूमा आउँदछन्। Google क्रोम, मोजिला, आदि हुनुहोस्। तर यी उपकरणहरू आधारभूत हुन् र ती पर्याप्त छैनन्। उपकरणहरू हुन्:
सामग्री बढाउनुहोस् वा घटाउनुहोस् (म्याग्निफाइ glass ग्लास)
रंग र कन्ट्रास्ट परिवर्तन
छविको वर्णन (कथा)
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो पर्याप्त छैन। तर ती चीजहरू जान्नु हामीलाई कुनै पनि समय मद्दत गर्न सक्छ। निम्न उपकरणहरू एड-अनहरू यसलाई प्रयोगकर्तामा बढाउनको लागि छन्। र रणनीतिहरू, सबैको लागि पहुँचको साथ वेब खाली ठाउँहरू प्रबर्धन गर्न।
नेत्रहीन प्रयोगकर्ताका लागि उपकरणहरू
निम्न उपकरणहरू पूर्ण नि: शुल्क छन् र तपाईं तिनीहरूलाई लिंकमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुन हामी छोड्नेछौं। अक्षमता को प्रकारको आधारमा प्रयोगकर्तासँग छ, केहि अधिक उपयोगी हुनेछ।
पहुँच र Color्ग पाel्ग्रा: यो र color संयोजनहरू छनौट गर्न उपकरण हो जुन पहुँच समस्याहरू प्रस्तुत गर्दैन।
उच्च कन्ट्रास्ट: यो एक उपकरण हो जसको साथ तपाईं भिन्नता छनौट गर्न सजिलो पदहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
ChromeVox नेत्रहीन समुदायको लागि आवाश्यक हुनु पर्छ - नेत्रहीन प्रयोगकर्ताहरूका लागि क्रोमको गति, बहुमुखी प्रतिभा र सुरक्षा ल्याउँछ।
CLiCk, बोल्नुहोस्: मोजिला फायरफक्स ब्राउजर को लागी स्क्रीन रिडर। यो उपकरण कठोर दृष्टि समस्या भएका वा पूर्ण रूपमा अन्धा भएका व्यक्तिहरूको लागि धेरै उपयोगी छ।
सजिलो कुरा गर्दै नोटपैड 3.0.०: यो उपकरणको साथ, तपाईंको कम्प्युटरले तपाईंको पीसीमा ईमेल सन्देशहरू वा पाठ कागजातहरू पढ्नेछ।
एड वेब: भाषण सिन्थेसाइजर ब्राउजर जसले वेब पृष्ठहरूलाई पाठ र प्रतीकहरूको संयोजनको रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्दछ।
रंग कन्ट्रास्ट जाँच: उपकरण जसले तपाइँलाई पृष्ठभूमि र पाठ र specify निर्दिष्ट गर्न र WCAG २.० सूत्र प्रयोग गरेर त्यसको कन्ट्रास्ट जाँच गर्न अनुमति दिन्छ।
सजिलो पहुँचको लागि वेब डिजाइन
यदि तपाईं वेब प्रोग्रामर हो वा मास्टर र तपाइँ एक प्रोजेक्ट सुरू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यी दिशानिर्देशहरू जानेर तपाईंले आफ्नो योजनाको योजना गर्नुपर्दछ। यसैले हामी सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई उस्तै सम्भावनाहरू हुने अनुमति दिनेछौं। निम्न प्रस्तावहरु मा डिजाइन गरीएको छ क्रिएटिव अनलाइन.
पृष्ठ हेडर प्रदान गर्नुहोस्
पृष्ठ हेडर (H1, H2, आदि) तपाईंलाई वेब पृष्ठको संरचना परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ। स्क्रिन रिडरले तपाईंलाई पृष्ठको हेडिingsहरूमा नेभिगेट गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरीकाबाट, एक स्क्रिन रिडर प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता सजीलै र द्रुत रूपमा पृष्ठको विभिन्न भागहरूमा पुग्न सक्दछ। पृष्ठ को सम्पूर्ण सामग्री को माध्यम बाट जाने को बिना।
छविहरूमा वैकल्पिक पाठ (ALT)
वैकल्पिक पाठ (आईएमजी ट्यागमा Alt गुण) गैर-पाठ सामग्रीको पाठ्य विकल्प प्रदान गर्दछ वेब पृष्ठहरूमा, जस्तै छविहरू। वैकल्पिक पाठ विशेष रूपमा व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी हुन्छ जसले वेबसाइटमा सामग्री पहुँच गर्न स्क्रिन रिडर प्रयोग गर्दछ।
जानकारी व्यक्त गर्न, आइकनहरू
वेबसाइटमा केहि 'नियम' वा दिशानिर्देशनको प्रसारणमा रंगहरूको प्रयोगले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई बुझ्न गाह्रो बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, एक फारम मा, यसले संकेत गर्दछ कि प्रविष्ट गरिएको ईमेल गलत हो र आइकनमा रातो होईन। यस तरीकाले यो सबैलाई देखिने छ।
गैर- HTML सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ
वेबसाइट मात्र पहुँच योग्य हुनु हुँदैन। वेब सामग्रीबाट समावेश वा लिंक गरिएको सबै सामग्रीहरू जस्तै भिडियो, अडियोहरू, पीडीएफ फाइलहरू, माइक्रोसफ्ट वर्ड कागजातहरू वा पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरणहरू पहुँच योग्य हुनुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » दृश्य अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयोग्य डिजाइन
यसका साथ काम गर्न एक शानदार डिजाइन स्टुडियो सिर्जना गर्नुहोस्
यी पाँच अनुप्रयोगहरूले तपाइँलाई सृजनात्मक थकानबाट बचाउनेछन्